TRUESTORY: မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး န၀ရတ် ဘာပြောသလဲ
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး န၀ရတ် ဘာပြောသလဲ
လတ်တလောမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့ န၀ရတ်ရဲ့ သတင်းအချို့နဲ့ပတ် သတ် ပြီး သူမကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်နေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီသတင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ခန့်က စစ်ဆေး ထားတဲ့ စစ်ချက်ဖြစ်နေတာကြောင့် စိုးရိမ်စရာဘာမှ မရှိဘူး လို့ သိရပေမယ့် သူမကို သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ဒါဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ အချိန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အားပေး နေတဲ့ ပရိသတ်တွေ သူမအတွက် မစိုးရိမ်ကြဖို့နဲ့ သူမဟာ ခု နေအိမ်မှာပဲရှိနေပြီး ပရိ သတ်တွေအတွက် အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အကြောင်း၊ အကယ်ဒ မီပွဲအတွက် ရင်ခုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။
န၀ရတ်ဟာ မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၂၀၁၂ ထဲမှာ ကားပြိုင်နှစ် ကားနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ပွဲဆူနေသူမို့ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ‘အကယ်ဒမီကတော့ တိမ်မင်းသမီး လဲရင်ခုန် တာပဲ။ မွေခံထိုက်သူလဲ ရင်ခုန်တာပဲ။ တိမ်မင်းသမီးကတော့ ပိုပြီးတော့ရစေချင်တာပေါ့နော်။ လူအများကြီးလဲထည့်ထားတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးမှာလဲ ပရိသတ်ကြည့်ရတာအားရတဲ့ ကားတစ် ကားပေါ့။ ဒီကားလေးထဲမှာ ရခဲ့တယ်ဆိုရင် အစ်မ ရိုက်ရကျိုးနပ်တယ်ပေါ့။ ဒါပြည်သူတွေကို ပင်ပင်ပန်း ပန်းနဲ့ ကြိုးစားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ပြသမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ကျေနပ် တယ်။ ရုံတင်တဲ့အခါမှာလဲ န၀ရတ်နဲ့ထပ်တူခံစားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။အကယ်ဒမီရရ၊ မရရ၊ အမြတ်ရရမရရအသာထား ဇာတ်ကားတစ်ကားအနေနဲ့ ဒရမ်မာကားကိုအားပေးတဲ့အတွက်၊ လက်ခံ တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးက သူတို့နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ဖန်တီးမှု အပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ပိုပြီးတော့ အားရှိတယ်။ ဒီကားကို မရိုက်ခင်တုန်းက အရမ်းစဥ်းစားရတယ်။ ဇာတ်က လဲ မင်းသမီးဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်မှပဲရမှာ။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံးပိုက်ဆံစုတယ်။ ပြီးတော့ ပါမဲ့သူတွေကို လျာ၊ လျာပြီးတော့မှအားလုံးကွက်တိပဲရွေးထားတဲ့သူတွေက အားလုံးလဲ အဆင်ပြေတယ်။ အားလုံးအထစ်အငေါ့မရှိဘဲ အဆင်ပြေတယ်။’လို့ ပြောပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေတစ်ဦးချင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပိုင်းကိုလည်း သူမက ‘တိမ်မင်းသမီး တစ်ဖွဲ့လုံး ကောင်းလို့လဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကောင်းသွားတာပါ။ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လေးက အစ်မရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်က ပေးတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့။ သူတို့ပြောလို့ ကိုယ်ကသိတာဆိုတော့ သူတို့ကိုလဲ ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီပရိသတ်ကို အစ်မလိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးဆပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်ရိုက်ရတာကလဲ ဇာတ်ရုပ်၂ ရုပ်လုံးကကောင်းတယ်။ အစ်မလုပ်ရမလား။ ညီမလုပ်ရမလား ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ၂ ခုစလုံးကကောင်းနေတယ်။ စာရေးဆရာမကလဲ ဗီဒီယိုဆို မရောင်းဘူး။ ရှေ့မှာလဲ ၃ ဦးလောက်လာဝယ်သေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ပဲ မျှော်မှန်း ထားတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ ရုံမှာကြည့်တဲ့သူတိုင်း သိပါတယ်။ လာကြည့်တဲ့သူတိုင်းပြန်ထွက်လာရင် မျက်လုံးလေးတွေမို့အစ်နေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဒီကားလေးဟာ ပရိသတ်အတွက် အစ်မရဲ့ အနုပညာတာဝန်ကျေတယ် လို့ပြောလို့ရတဲ့ကားလေး တစ်ကားပါ။ ပါတဲ့ဇာတ် ကားနှစ်ကားလုံးက ပင်ပန်းတယ်။ မွေခံထိုက်သူမှာဆိုလဲ ချိုင်းထောက် နဲ့အရမ်း ခက်ခဲပါတယ်။ သူတောင်း စားမအခန်းနဲ့ သားက ဆွမ်းခံကျွေးတဲ့ထမင်းကို ထိုင်စားတယ်။ တိမ်မင်းသမီးကျတော့လဲ လှလှပပ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဇာတ်အိမ်တစ်ခုလုံးက ဟာကွက်မရှိအောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ တစ်ဖွဲ့လုံးကိုရစေချင် ပါတယ်။ တိမ်မင်းသမီးကိုလဲရစေချင်တယ်။ မွေခံထိုက်သူကိုလဲ ရစေချင်တယ်။ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင် ချင်တယ်။ ကျော်ဟိန်းသမီးဆိုတော့ လောဘကြီးတယ်။ အားလုံးကိုရစေချင်ပါတယ်တဲ့။ အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ၀တ်မဲ့ဝတ်စုံကိုတော့ တိမ်မင်းသမီးတစ်ကားလုံးကိုချုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာမလတ်ကစီစဉ်ပေးမှာပါ။ မိတ်ကပ်လဲအဲလိုပါပဲ။ ဦးမာပဲပြင်ပေးမှာပါ။ ပိုးထည်ကတော့ မလတ်ကိုပဲစီစဉ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ လေ။ အစ်မ၀ယ်လာတဲ့ဟာလေးတွေလဲရှိတော့ သူ့ဆီပို့ထားတယ်။ သူပဲစီစဉ်ပေးမှာပါ။’ လို့ပြောပြပေးခဲ့ပါ တယ။်
Posted by Gentle Men at 11:56 AM
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဆုံးဖြတ်...
လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များအား စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေသည့် ရဲ...
ခွန် ဒီးယမ် အပါအ၀င် ဦးဝီရသူကို ဝေဖန်နေသူများ ငရဲက...
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းအား နိုင်ငံခြားသားပညာရ...
မိကျောင်းကန်ဆန္ဒပြသူများနှင့် ခိုင်းစေသူအဖွဲ့ကြားေ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းအား နိုင်ငံရေးအမြ...
ဂျပန်- အာဆီယံ ယူ၁၄ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မြန်မာအသင်း သွ...
သမိုင်းကို အဆိပ်မခတ်ပဲ အဖြေတွက်ကြမယ်ဆိုရင် ...
ပရိသတ်ဆန္ဒနှင့် တစ်ထပ်တည်း ကျစေခဲ့သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရ...
၂၀၁၂ ခုခေတ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှ ပေးအပ်ခဲ့သော ဆုများ
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း သျှမ်းနီလူငယ်တစ်ဦး၏ သဘောထား...
လှိုင်သာယာ၊ ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာ၌ တဲထိုးနေရန် လာရောက်ြ...
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်
၅၉ (က ) (စ) အတွက် သတင်းကောင်း
အာဏာရှင် ကြီး ရဲ့ ချက်ချင်းပြင်
မလေးရှားမှာပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားများကို မြန...
အိမ်ကျယ် မီဒီယာများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နေမျိုးဝေ တွြေ့...
သတိလေးထားပြီး ဖေ့ဘွတ်ခ်ကို သုံးကြပါ
ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံတွင် ဂျပန်နည်းပညာအသုံးပြုထားသည့်ေ...
အာရှဖလားပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရာက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်မြန်မာ ...
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် NLD ပါတီဝင်များ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း နှင်...
လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်း ဆက်လက် အအေးပေါ့နေဦးမယ်
ကျွန်မပုံ အင်တာနက်မှာ တက်လာတယ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အိုးအိမ်ပိုင် မြေကွက်ပေါ်တွင် ...
မူးယစ် ဆေးဝါး ချက်လုပ်သော စခန်းပုန်း နှစ်ခုအား လက်...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း နောက်အစိုးရပ်လက်ထပ်မှ ညှိနှိုင်းမည...
"" မှားပြီးရင်း မှားနေတော့မှာလား""
"ကုလား"လို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ဒေါ်စုကြည်
ဒီချုပ် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရဲအယောင်ဆောင်လူတစ်စု နေအိမ်ပေါ်ထိ ၀င်ရောက်လုယက်မှု တ...
KIA တပ်မဟာ(၁)မှ အမျိုးသမီး ၇ ဦး တပ်မတော်နှင့် လာရေ...
Myanmar Sexy Model Girl- Zar Zar Htet (5 Nos)
KIA ဖမ်းဆီးခံ ရှမ်းပြည်သူများ ပြန်လွတ်မလာပါက ထပ်မံ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စက်ရုပ် အာကာသ ယာ...
ဆိုးနေတဲ့ ကံကို ပြုပြင်နည်း
ဗိုက်ခေါက်ထူ/ ဗိုက်ပူလို့ အလှပျက် နေသူများ အတွက်
အမျိုးသမီး ငယ်များ ဂရုပြု ရှောင်ကျဉ် နိုင်စေဖို့
ဆန္ဒပြ သူများကို ထိုင်းရဲဖြိုခွင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေး အတားအဆီးဖြစ်သည်ဆိုသ...
ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လျှောက်သွားတာ ဘယ်သူမှ မသိလိ...
ဘယ်ရေခွက်ထဲက သောက်သောက်.. ရေ ဟာ ရေ ပါဘဲ.
ATM ကတ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူရာတွင် အင်တာနက် ပြတ်တောက်ခြင...
မနေ့ညက Night Club မှာလူသတ်မှုဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင် ရဲ...
ပြည်သူ့ပါတီNLD နှင့် ယခုမွတ်ဒေါပ်းပါတီ NLD
တောင်ကြီးမြို့၊ ခရစ်စမတ်နေ့၊လက်လုပ်မိုင်း တခုထောင်...
NLD ပါတီ အား လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြသူ ပါတီဝင် ခေါင်းဆောင...
AFC U-22 Championship 2013 ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးအဆင့...
မောင်ကိန်းရွှေဆိုင် ဓားပြမှုတွင် ကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့်ေ...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို အခြေခံ၍ ပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင်ပါက ဥပဒေသက်...
၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်နိုင်ဟု သုံ...
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလှဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးရင်း နယူးရ...
မန္တလေးမောင်းကိန်းရွှေဆိုင်အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခက်လုယက...
ယာဉ်နှစ်ထပ်ရပ်ခြင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ဖေ့စ်ဘုတ်မှတ...
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကာလက စီစဉ်ခဲ့သော ရန်ကုန်-နေပြည်တေ...
ဆီးဂိမ်းပရိသတ်များကို ဖမ်းစားခဲ့သော ပြကွက်ရှစ်ကွက်...
မြန်မာဘောလုံးအသင်း ကမ္ဘာ့အဆင့် ရပ်တည်မှုမှာ အံ့အားသင...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် Miss ASEAN 2013 ပြိုင...
အလှဆုံးအလှမယ် ဆန်ခါတင်၃၀စာရင်းမှာ ထပ်မံရွေးချယ်ခံရ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် March လခန့်တွင် Google Talk ရပ်ဆိုင်းမ...
We are Burma လို့ဘယ်သူ အငြင်းပွားခဲ့သလဲ???
သတင်းထောက် ၂ ဦးအပေါ် ထိုင်းရေတပ် စွဲဆိုချက် ရုပ်သိ...
မင်္ဂလာသတင်းကို ၂ဝ၁၄မှာ ပြောပြမယ့် ဂန္တဝင်
ဖိုးပျံတောင် တောရ ကျောင်း တိုက် တွင် ဆရာတော် တစ်ပါ...
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ နိုင်ငံအလိုက် ဆုရရှိမှု အခြေအနေ
2016 AFF Suzuki Cup နောက်ဆုံးအဆင့် ပွဲစဉ်များ မြန်...
ဆုတ်လဲစူး စားလဲ ရူး - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ ပဒိ...
ရည်းစားဘ၀မှာ အပျိုစင်ဘ၀ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းက ဂုဏ်သိ...
ဆီးဂိမ်းစ်ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိကွင်း၌ စည်က...
ခွင့်ပြုမိန့် မရသောကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်က ရှမ်းမျို...
ဒီမှာက မင်းသားကိုဖားရင် ဒါရိုက်တာ ဖြစ်တယ်
သွေးရဲသည့် မြန်မာလက်ဝှေ့ကစားသမားများမှ ၇ ဦးတိတိ ဗ...
စင်ကာပူ အိန္ဒိယရပ်ကွက် ဆူပူမှုတွင် ပါဝင်သူ ၅၃ ဦးကို...
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းကို နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များ အြံ...
ဒီနေ့ ကျွန်မ သင်ခန်းစာ တစ်ခု ရခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ ...
အိန္ဒိယဒိုင် အဆုံးအဖြတ်ကို အာရှ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သိ...
ဘာကြောင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံ ကို ဒိုင်တွေ ညစ်သလဲ ?